10 arrimood oo beenaaleyaasha oo dhan ka siman yihiin
Home Maskax-fur 10 arrimood oo beenaaleyaasha oo dhan ka siman yihiin
Qofka beenta sheegaya waxaan ku garan kartaa qaar ka mid ah dabeecadisiisa iyo dhaqamada uu leeyahay.
Beenaale kasta calaamadahan wuu leeyahay. - UNSPLASH
Imisa goor baad been sheegtay? Waa suuragal in aad mid yar xitaa sheegtay. Balse dadka sida joogtada ah beenta u sheega ay leeyihiin astaamo lagu garto.
In been aan meel kasta ku sheegto waa qad cas oo xun oo aan laga gudbin. Maskax ahaanna ma wanaagsana beenta badan.
Xitaa haddii aysan ahayn, wax ay u qasdaan, beenaaleyaasha waxay lumiyaan kalsoonida, mana suuragaleyso in xiriir wanaagsan oo la isu uur-fayowyahay ay helaan.
Halkan waxaan idiinkugu soo gudbineynaa waxa ay isku midka ka yihiin dhammaan beenaaleyaasha.
Beenaaleyaasha iskuma kalsoono – Cabsi ayey dareemaan
Faafinta beenta iyo wararka aan jirin, waxaa suuragal ah in ay u arkaan qaab ay dadka kale ula xiriiraan, ayna wanaag ka dareemaan. Balse dadka sida joogtada ah beenta u sheega waxay xitaa been ka sheegaan dabeecadahooda si ay u xoojiyaan kibirkooda sii jabaya.
Beenaaleyaasha in ay wax xakameeyaan ayey jecel yihiin
Mid ka mid ah sababaha aad ku fahmi karto beenaalaha waa in uu isku deyo xakameynta sida qofka kale uu dareemayo. Warar marin habaabin ah, hadalka oo aysan kuu ogolaan, in wax kale ay kugu mashquuliyaan – waa dabeecadahooda. Wuxuu isku deyayaan in uu wax ka badalo sida aad uga falcelineyso beenta uu sheegayo – taa waxay sameyn karaa marka ay garanayaan qofka ay beenta u sheegayaan.
Beenaaleyaasha way qariyaan waxa qalbigooda ku jira
Beenaale, runta oo keli ah ma qariyo balse wuxuu qariyaan dareenkiisa iyo waxa qalbigiisa ku jira. Been ayey sheegaan in ay uga fogaadaan in xaqiiqada ay wajahaan.
Beenaaleyaasha waa kuwo ku wanaagsan dhageysiga hadalka
Wax kasta oo dadka ay ka aaminsan yihiin, haddana beenaalaha waa qof si deggan dadka u dhageysta. Waxay taa ka ta akaan xog ay mustaqbalka adeegsadaan oo si been ah u dhigaan. Waxay ogaanayaan nooca beenta ee aad aaminto. Waxay baranayaan dhaqankaaga iyo dabeecadahaaga si ay dareenkaaga u farageliyaan mustaqbalka.
Beenaalaha wuxuu leeyahay soo jiidasho
Beenaalaha wuu dhoollacadeeyaa – muduxuu ruxaa ama gilgilaa marka lala hadlayo – horey ayuu u soo fadhiistaa – qofka u sheekeynayana si toos ah ayuu u eegaa. Waa dabeecadaha lagu yaqaano dadka daacadda ah. Haddaba iska ilaali yaan sidaa lagugu dagin ama gaadin ee; Wanaaggaas waa daboolk beentooda.
6.Beenaaleyaasha si degdeg ah ayey u fakaraan
“Ums” iyo “uhs” waa khiyaanada dejinta beenta – haddaba dadka markasta beenta sheega, waxay garanayaan sida loo fakaro il-biriqsiyo gudahood. Beenaalaha wuxuu og yahay sida uu uga badbaadi karo in lagu qabto beenta ama hadallada is dhaafsan. Marka quu is dhowraa.
Beenaaleyaasha dadka kale in ay eedeeyaan ayey jecel yihiin
Way u fududahay in ay iska wareejiyaan indhaha dadka, waxayna eedda saaraan qof kale. Haddaba si aad uga badbaado beentaas, waa in aad raadisaa meesha xogta ay ka timid, halkii aad aamini lahayd wax laguu sheegay oo aan jirin.
dadka beenta badan xusuus ayey leeyihiin – (Kuwa beenta ku cusub ma ahan)
Beenaaleyaasha aadka u garanayo beenta waxay xusuusan karaa waxa ugu yare e ay sheegeen – waxay sidaa u sameeyaan in aan lagu helin hadal is dhaafsan.
Beenaalaha wuu celiyaan ama qariyaa xaqiiqada xogta
Hadalka way yareeyaan, waxayna sheegaan been ay isu soo diyaariyaan, si aysan uga kala baahin una illaawin. In kastoo beenaalaha uu xusuusan karo waxa ugu yare e uu sheegay, haddana way og yihiin bixinta xog badan in ay saameyn ku yeelan karto, marka hadalka way koobaan. Beenaalaha markasta wuxuu sheegaan hadal aan dhameystirnayn, si ay adiga dareenkaaga u saameeyaan – Tusaale: “Aniga intas baan ogahay, adiga raadso xogta kale. Wixii aan ogaaday baan kuu sheegay”, waa nooc ka mid ah hadalkooda. Xusuusnow, haddii aad runta kala qariso, waxaad noqoneysaa beenaale.
Beenaalaha wuxuu ka gubanayaa gudaha iyo qalbiga
Ka hor inta aadan qof ku eedeyn in uu beenaale yahay ama qof kale uu ku eedeynayo wax aan jiri, is weydii maxay tahay sababta uu beenta u sheegayo? Ma wuxuu qarinayaa xanuun laabta kahaya? Ma waxay isku deyayaan in ay ka fogaadaan cawaaqib xumo? Ma ceeb ku soo socotay ayey iska leexinayaan? Haddaba waxaa dhab ah in qalbiga iyo uurka ay ka gubanayaan. Beentana waxay u sheegayaan si ay ugu qaboobaan – balse hur ayey ka sii qaadaan.
Haddii aad dareento in qof saaxiib dhow kula ah ama aad jeceshahay in uu si joogto ah been kugu sheegayo, ha qarinin ee kala hadal. Waxaad isku deydaa in aad ka qabato ka hor inta aysan meel xun gaarin xaaladda beenta badan. Haddii aad u noqoto meesha ay sirtooda u sheegtaan kuna kalsoon yihiin, taa waxay ka caawineysaa ka joojinta qofkaas in uu beenaale noqdo.
Previous article7 Bilyaneer oo aan lacagtooda u isticmaalin sida taajiriinta kale